रबि लामिछानेले आँट गर्नुको पछाडी बालेनको हात ! – Taja Khawar
रबि लामिछानेले आँट गर्नुको पछाडी बालेनको हात !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ०९, २०७९ समय: १६:४०:३४
सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम संचालन गरेर चर्चित बनेका रवि लामिछानेले छोटो समयमै संचारक्षेत्रमा लोभलाग्दो सफलता प्राप्त गरेका थिए ।
न्युज २४ टेलिभजन हुँदै पछि ग्योलेक्सी फोर के टेलिभिजन आफैँ संचालन गरेका उनी अन्तत पुर्णकालिन राजनितिको मैदानमा होमिएका छन् । केहि समय अघि मात्रै निकै ठूलो लगानी गरेर ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन खोलेका रविले
यत्ति छिट्टै राजनितीको मैदानमा होमिएलान् भन्ने अनुमान सायदै कसलै गरेका थिए तर उनले क्रमभंगता गरेर नयाँ गोरेटोमा यात्रा थालनी गरेका छन् । यहि बेला रविले किन यो निर्णय लिए त भन्ने चासो र विश्लेषण पनि सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर नयाँ पार्टी घोषणा गर्दा रविले आफु राजनितीमा होमिनु पर्नाको धेरैवटा कारणहरु खुलाएका छन् । निकै दमदार भाषण गरेका उनले टेलिभजनबाट प्रश्न मात्रै
सोधेर समस्या समाधान नहुने भन्दै जवाफ दिने ठाउँमा पुग्नु पर्ने भन्दै राजनितीमा आएको बताए । रविले त्यो भन्दा पनि अर्को मर्मस्पर्शीकुरा गरेका छन् ।
पार्टी घोषणा कार्यक्रममा निकै भावुक भएका रविले नेपालमा जनता रोएको दृश्य आफुले भन्दा बढि कसैले नदेखेको बताएका थिए । जनताको त्यो आँशुनै राजनितिमा होमिनुको प्रमुख कारण भएको उनले बताएका छन् ।
ठूलो अपेक्षा सहित राजनितीमा होमिएका उनको मोटिभेशनको भित्री फ्याटर भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह रहेको बताइन्छ । दलहरुको दबदबा रहेको बेलामा र्यापर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्ने चुनौती खडा गरेका थिए ।
स्वतन्त्र उमेदवारले पनि राम्रो भिजन लिएर जनताको मन जित्न सक्दा राजनितीक दलको घेरा तोडेर सानदार जित निकाल्न सक्छ भन्ने उदाहरण बालेनले देखाएका थिए । बालेनको सफलतालेनै रविलाई पनि राजनितीमा हाम फाल्न मोटिभेट गरेको बताइन्छ ।
बोलेनले स्थानिय तहको निर्वाचनमा उमेदवारी प्रस्तुत गरेर मैदानमा होमिएका बेला रविले आफ्नो टेलिभिजनबाट सक्दो साथ दिएका थिए । आँटे सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण बालेनले देखाए पछि अहिले प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारीको लहरनै चलेको छ । बालेनले कोरेको झिल्कोको प्रभावनै यो भएको भन्न सकिन्छ । रविहरु पनी यहि पदचापलाई पच्छाइरहेका छन् ।
रवि लामिछानेले पार्टी घोषणा गरे पछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिले सम्म केहि प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन् । रविले प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने बालेनको भित्री चाहना रहको उनका निकटस्थहरु बताउँछन् । यद्यपी रविको कदमलाई उनले सकारात्मक रुपले लिएको खबर छ ।
Last Updated on: June 23rd, 2022 at 4:40 pm